Allgedo.com » 2012 » October » 12
Home » Archive Daily October 12th, 2012
War Deg Deg ah: Qaraxyo caawa kadhacay Xafada Islii ee Magaaladda Nairobi
Qaraxyo xoogan ayaa caawa ruxay xaafada Islii ee Magaaladda Nairobi iyadoona qaraxyadaas ay qasaaro gaysteen. Goob jooge ayaa AOL usheegay in qarax bambo ah lagu weeraray baar kuyaal xaafada Juja Road oo kuyaal Islii. Qaraxaas ayaanan gaysan wax qasaaro ah, waxaana goobta gaaray ciidamo katirsan kuwa amaanka Kenya. Markii ay ciidamada goobta gaareen ayaa waxaa hadana la maqlay qarax xoogan oo lala...
Xaflad si heer sare loo soo agaasimay laguna taageerayay magacaabista Ra’iisal wasaaraha oo ka dhacday Khartoum (Sawiro)
Boqolaal qof oo soomaali ah ayaa soo buux dhaafiyay Hoolka shirarka ee Jaamacada afrika halkaas oo habeenimadii xalay ka dhacday xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu tagaeerayay magacaabis uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay Ra’iisal wasaaraha cusub ee soomaaliya. Dadka xaflada ka soo qeyb galay waxaa ka mid ahaa Safiirka soomaaliya u fadhiyo wadanka Sudan Mudane Maxamed...
Sanad guuradii 58-aad ee maalinta calanka Qaranka oo maanta ku beegan 1954-2012
Maanta oo ah 12kii Oktoober 2012 kuna beegan sannad guuraddii 58aad ee helida astaanta calanka qaranimadda soomaaliyeed, nasiib wanaag xuskani wuxuu ku soo beegmay xili ifafaalihii dowladnimo u dhalatay shacabka soomaaliyeed, taasoo la rajeynaayo in ay soo af jarmaan colaaddii iyo amaano daraddii dalka ka jirtay oo ay aad iyo aad u adkeyd in dadka dhibaateysan in la gaarsiyo gargaar deg deg isla markaasi...
Qarax Qasaaro gaystay oo ka dhacay Magaaladda Baydhabo iyo Howlgalo soconaya
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaas uu maanta ka dhacay qarax xooggan oo qasaaro gaystay. Qaraxan ayaa waxaa bartamaha Magaaladda lagula eegtay ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya oo Roondo ku marayay gudaha Magaaladda. Goob jooge ayaa AOL usheegay in qaraxa uu ahaa Bambo nooca gacanta laga tuuro ah, waxaana la arkayay dhimasho iyo dhaawac ciidamada...
Xildhibaan ka digay in laga hor yimaado Ra’isul Wasaaraha cusub iyadoo aan la arkin wax qabadkiisa
Xildhibaan katirsan Mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan Ra’isul Wasaaraha dowalda Soomaaliya Dr Saacad Faarax la horgeyn doono Xildhibaanada barlamaanka. Waxaa uu sheegay in Xildhibaanada uu ka horjeedin doono waxa uu qabanayo hadii la ansixiyo kadibna ay xildhibaanada ucodeyn doonaan in xilkaas loo yeelay ama loo diiday. Xildhibaan Mahad Salad oo kamid ah Xildhibaanada...
Gudoomiyaha dowlada ee degmada Huriwaa oo dil ka bad baaday
Gudoomiyaha Maamulka dowlada Soomaaliya ee degmada Huriwaa ayaa ka bad baaday fal dil ah oo lagu qaarajin lahaa iyadoona gudoomiyaha uu faah faahin ka bixiyay qaabkii uu ubad baaday. Gudoomiyaha degmada Huriwaa Cumar Jacfaan waxaa uu sheegay in weerar bambooyin ah lagu soo qaaday gaari uu la socday gudaha degmadaas. ‘Gaarigii aan la socday ayaa qaraxyo lagu soo weeraray, waana ka bad baaday Allah...
Maamulka Ximan & Xeeb iyo Galmudug oo siyaabo kala duwan uga hadlay dagaal xooggan oo ka dhacay Hobyo
Maamuladda Ximan iyo Xeeb iyo Galmudug State ayaa shalay ku dagaalamay degmada Dekada leh ee Hobyo iyadoona dagaalkaasna ay siyaabo kala duwan uga haleen labada maanul. Madaxweynaha maamulka Galmudug State Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa sheegay in dagaalkaas uu dhacay shalay kadib markii ciidamo uu isaga hogaaminayay ay weerar ku qaadeen Ciidamo kale oo kusugnaa dekadda Magaaladda kuwaas oo uu...
Xildhibaan ka digay iska horkeenida shacabka degan Magaaladda Kismaayo
Mudane katirsan barlamaanka Soomaaliya ayaa kahadlay xaalada goboladda Jubooyinka iyo qaabkii loogu samayn lahaa Maamul loo dhan yahay. Xildhibaan Maxamed Cismaan Dhuubow oo kasoo jeeda goboladda Jubooyinka ayaa isagoo kusugan Magaaladda Muqdisho waxaa uu sheegay in magaaladda Kismaayo ay tahay magaalo weyn oo istiraatiiji ah taaasna ay keentay in ay dad badan kahadlaan. Waxaa uu si gaar ah ula hadlay...